Dopamine သည်အပြုအမူအားထိန်းချုပ်သောအဓိက ဦး နှောက်ပတ်လမ်းများကိုပုံဖော်သည် (၂၀၀၈) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
ဒါကြောင့်သွားလာရင်းဆားကစ်ကိုခိုင်ခံ့အဖြစ် Dopamine အချို့ရပ်နားဆားကစ်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်
ပါကင်ဆန်၏လူနာများကို dopamine သည်အဘယ်ကြောင့်အေးခဲစေကြောင်းနက်နဲသောအရာအားဖွင့်ထားခြင်း
ချီကာဂို - ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ရောဂါများဖြစ်သော်လည်း ဦး နှောက်တွင်းရှိ dopamine ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပါကင်ဆန်လူနာများအနေဖြင့်လုံလောက်မှုမရှိပါ။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများကအလွန်အကျွံရ။ ဤရောဂါများအတွက် dopamine ၏အရေးပါမှုကိုလူသိများသော်လည်း၎င်း၏လုပ်ဆောင်ပုံသည်လျှို့ဝှက်နက်နဲသည့်အရာဖြစ်သည်။
Northwestern University မှ Feinberg ဆေးပညာသုတေသနမှသုတေသနပြုချက်အရ dopamine သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိအဓိက circuit နှစ်ခုအားအားဖြည့်ပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်သည်။ ၎င်းသည် dopamine ရေစီးကျခြင်းကြောင့်အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် dopamaine နည်းပါးခြင်းကြောင့်ပါကင်ဆန်၏လူနာများကိုအေးခဲစေပြီးမလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
ဦး နှောက်၏အဓိကကွင်းဆက်နှစ်ခုကို dopamine မည်သို့ပုံဖော်သည်နှင့်ဤရောဂါအခြေအနေတွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်မည်ကိုထိန်းချုပ်သောထိုလေ့လာမှုကပြသခဲ့သည်” ဟု ဦး ဆောင်စာရေးသူ D. Nathan Smith Davis ပါမောက္ခ၊ Feinberg ကျောင်း။ အဆိုပါစာတမ်းကိုသိပ္ပံဂျာနယ်၏သြဂုတ်လ ၈ ရက်ထုတ်တွင်ထုတ်ဝေသည်။
အဲဒီနှစျခုအဓိကဦးနှောက်ဆားကစ်ကိုအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်မထုတ်ဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ကူညီပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်အိပ်ရာကိုချွတ်ရမပူပြင်းတဲ့နွေရာသီညဉ့်တွင်ဘီယာတစ်ဦးရေခဲခြောက်အထုပ်အဘို့စတိုးဆိုင်မောင်း, ဒါမှမဟုတ်ပဲအိပ်ရာပေါ်တွင်လဲလျောင်း?
Circuit တစ်ခုသည်“ stop” circuit တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအလိုဆန္ဒအပေါ်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုတားဆီးသည်။ အခြားတစ်ခုကသင့်အားလုပ်ဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသော“ go” circuit ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားဆားကစ်များသည် ဦး နှောက်၏နေရာဖြစ်သော striatum တွင်တည်ရှိပြီးအတွေးများကိုလုပ်ရပ်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။
လေ့လာမှုတွင်, သုတေသီများနှောက် cortex ချိတ်ဆက် synapses ၏အစွမ်းသတ္တိကိုသဘောထားအမြင်, ခံစားခကျြမြားနှငျ့အတှေးထဲမှာပါဝင်ဦးနှောက်၏ဒေသသည် striatum ငှါ, ရပ်တန့်၏အိမ်နှင့်ကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်အရေးယူတားဆီးကြောင်းဆားကစ်ကိုသွားဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည် cortical အမျှင်များကိုလျှပ်စစ်ဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးပြီးလှုပ်ရှားမှုညွှန်ကြားချက်များကိုတုပရန်နှင့် dopamine ၏သဘာဝအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ နောက်အဖြစ်အပျက်ကသူတို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်။ “ go” circuit နှင့်ဆက်သွယ်နေသော cortical synapses များသည်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီးပိုမိုအားကောင်းလာသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် dopamine သည်“ stop” circuit ရှိ cortical connection များကိုအားနည်းစေသည်။
"ဒီစွဲလမ်းမှု၏အခြေခံဖြစ်နိုင်သည်" Surmeier ကဆိုသည်။ “ မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြင့်ထုတ်ပေးသော Dopamine သည် striatal 'go” ဆားကစ်များကိုမောင်းနှင်သည့် cortical synapses ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောအားဖြည့်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အဖြစ်အပျက်များ - သင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသည့်နေရာ၊ သင်ခံစားခဲ့ရသည့်ဖြစ်ရပ်များ - ဖြစ်ပျက်လာပါကမူးယစ်ဆေးဝါးများရှာဖွေရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်မထိန်းချုပ်နိုင်သည့်မောင်းနှင်မှုတစ်ခုရှိသည်။ ”
“ ကျန်းမာတဲ့ ဦး နှောက်ထဲရှိကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည်တစ်ခုခုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ရန်တိုက်တွန်းခြင်းအားဖြင့်ဟန်ချက်ညီညီရှိသည်။ “ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းက dopamine ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့ရွေးချယ်မှုလုပ်ရပ်တွေကိုကူညီတဲ့ ဦး နှောက်ပတ်လမ်းကိုအားဖြည့်ပေးရုံတင်မကဘဲကျွန်တော်တို့ကိုရပ်တန့်စေနိုင်တဲ့ဆက်သွယ်မှုများအားနည်းနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ”
စမ်းသပ်မှု၏ဒုတိယအပိုင်းတွင် dopamine neuron များကိုသတ်ခြင်းဖြင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူတို့ cortical command များကိုလှုံ့ဆော်သောအခါဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုကြည့်ကြသည်။ ရလဒ်မှာ“ stop” circuit ရှိ connection များပိုမိုအားကောင်းလာပြီး“ go” circuit ရှိ connection များအားနည်းလာသည်။
"ပါကင်ဆန်လူနာတွေဟာရေငတ်တဲ့အခါရေခွက်တစ်ခွက်သောက်ခိုင်းပြီးစားပွဲပေါ်ကိုတက်တာမျိုးလိုနေ့စဉ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့ဘာကြောင့်အခက်တွေ့နေရတာလဲဆိုတာလေ့လာမှုကမီးမောင်းထိုးပြနေတယ်" ဟု Surmeier ကပြောကြားခဲ့သည်။
Surmeier ကဖြစ်ရပ်ဆန်းကိုကားတစ်စီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ရှင်းပြသည်။ “ ပါကင်ဆန်ရောဂါကိုမကူးစက်နိုင်တဲ့ဓာတ်ငွေ့ကုန်နေတဲ့ကားလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကပြသနေပါတယ်။ “ အဲဒီအစားကားကမလှုပ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဘရိတ်ကမင်းရဲ့ခြေထောက်တွေပျက်စီးသွားလို့လေ။ ပုံမှန်အားဖြင့် Dopamine သည်သင့်အားဘရိတ်နှင့်ဓာတ်ငွေ့ခြေနင်းဖိအားကိုညှိပေးသည်။ လမ်းဆုံလမ်းကွောင်းတွင်အနီရောင်အလင်းကိုသင်တွေ့သောအခါ၊ သင်ဘရိတ်သည်နှင့်အစိမ်းရောင်မီးလာသောအခါဘရိတ်မှသင်၏ခြေထောက်ကိုချွေလိုက်ကာသွားရန်ဓါတ်ငွေ့ခြေနင်းကိုဖိထားကြောင်းသင်ကကူညီပေးသည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများ, dopamine ကိုထုတ်လွှတ်သောအာရုံခံဆဲလ်များကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသောသူများသည်ဘရိတ်တွင်အမြဲတမ်းသူတို့၏ခြေထောက်များကိုကပ်ထားကြသည်။
ဦး နှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်အခြေခံကိုနားလည်ခြင်းသည်သိပ္ပံပညာရှင်များအားဤ ဦး နှောက်ရောဂါများနှင့် schizophrenia, Tourette's syndrome and dystonia စသည့် dopamine ပါဝင်သောအခြားကုထုံးဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှု: Striatal Synaptic ပလပ်စတစ်၏ Dichotomous Dopaminergic ထိန်းချုပ်ရေး
သိပ္ပံ 8 သြဂုတ်လ 2008:
Vol ။ 321. အဘယ်သူမျှမ။ 5890, စစ 848 - ။ 851
Weixing Shen, 1 မာ့ခ် Flajolet,2ရှင်ပေါလု Greengard,2ဃဂျိမ်း Surmeier1 *
cortical pyramidal အာရုံခံများနှင့်အဓိက striatal အလတ်စား spiny neuron (MSNs) အကြား synapses မှာ postsynaptic D1 နှင့် D2 dopamine (DA) အဲဒီ receptors များသည်ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏သွေးဆောင်မှုအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ရန် postulated ဖြစ်သည်။ သင်ယူခြင်း။ ဤ receptors နှစ်ခု MSN လူ ဦး ရေကိုကန့်သတ်ထားသောကြောင့်, ဒီ postulate synaptic ပလပ်စတစ်ဆဲလ်အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအတွက်တညီတညွတ်တည်းဖြစ်ရန်တောင်းဆိုနေပြီ။ DA receptor transgene ကြွက်များမှ ဦး နှောက်ချပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဤကိစ္စသည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။ ယင်းအစား DA သည်ဤ MSN အမျိုးအစားနှစ်မျိုးတွင်ထပ်တူအခန်းကဏ္ plastic မှပါဝင်သည်မှာသေချာသည်မှာ Synaptic plasticity သည် bidirection နှင့် Hebbian ဖြစ်သည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါမော်ဒယ်များတွင်ဤစနစ်သည်မျှတမှုမရှိခြင်းကြောင့်ကွန်ယက်ရောဂါဗေဒနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်နိုင်သည့်ပလပ်စတစ်ပြောင်းလဲမှုကိုတစ်ဖက်သတ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေသည်။